#Real Madrid ayaa dalab rasmi ah u diri doonta Eden Hazard MAANTA, sida laga soo xigtay wargeysyada Spain. - Get Latest News From Horn of Africa
#Real Madrid ayaa dalab rasmi ah u diri doonta Eden Hazard MAANTA, sida laga soo xigtay wargeysyada Spain.
Real Madrid ayaa sameyn doonta saxiix muhiim ah inta lagu jiro horaanta bisha June ee soo aadan, waxeyna warbixinada Spain ka imaanaya sheegayaan in Los Blancos ay ku dhawaaqi doonto saxiixa Eden Hazard isbuuca ugu horreeya bisha June.
Hazard wuxuu xalay kooxdiisa Blues u suuragaliyay iney hanato markii labaad tartanka Europa League, wuxuuna u muuqdaa mid kasii baxaya garoonka Stamford Bridge sida laga gartay wareysi uu bixiyay kadib kulanka.
Si kastaba wargeyska AS ee laga leeyahay Madrid ayaa ka dhawaajiyay in 3-da June ay kooxda boqortooyada baahin doonto saxiixa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican kubadda cagta waqtigaan, waxaana la leeyahay waxaa midoobaya laba shaqsi oo aad isku ixtiraama (Zidane & Eden).
Sida lagu daabcay wargeyska The Sun, lacagta Eden Hazard lagu iibsanayo waa 100 Malyan oo Pound, waxaana raaci doonta gunno lagu sheegay 15 Malyan oo Pound.
Waxey filashadu tahay inuu saxiixi doono heshiis lix sanadood ah kaas oo isbuucii uu ku qaadanayo 400,000 kun oo Pound, waxaana sidoo kale lasoo warinayaa in Florentino Perez uu maalmahii ugu dambeeyay aad uga shaqeynayay sidii uu heshiiskaan ku dhici lahaa.
“Waxaan sanado badan isku dayeynay inaan Eden Hazard keeno Real Madrid” ayuu yiri Perez isagoo la hadlayay Onda Cero.
“Waxaan ka shaqeyneynaa qorshe ay mar kale dadka ku riyoodaan, taasoo aan kusoo celineyno hamigeena iyo baahideena, horay ayaan marxaladaas ugu soo noolaanay”
“Waxaan ku riyooday in Eden uu sanadkaan imaanayo, aan kooxda ka dhigno mid fiican sanadkaan”
Sidoo kale Florentino Perez wuxuu xaqiijiyay iney sanadkii hore xitaa dooneen, balse markaan ay sahlan tahay maadaama kaliya hal sano uu kaga haray qandaraskiisa.